Laga yaabaa 25, 2018 admin
Mike Novogratz: baaritaan US Gov galay Seeraar waa wax fiican
Maal Maalqabeen Mike Novogratz ayaa sheegay in uusan la yaabay by eedeymaha iyo soo dhaweeyay baaritaanka, dareen ah celiyay by Cameron Winklevoss, Madaxweynaha sarrifka crypto Gemini. dibi Seeraar ugu weyn ee Wall Street ee talaabadan ammaanay sida bilowga kormeer sharciyeed loo baahan yahay.
"Jaridda dhirta ka soo jilayaasha xun waa wax fiican, ma wax xun caafimaadka ee suuqa,"Novogratz, kaas oo kor u dejinta bangiga baayacmushtariga cryptocurrency Galaxy Digital LP, ku sheegay wareysi uu. "Plenty of is dhaafsi leedahay tirada mugga buunbuuniyo si ay u abuuraan dareen qaar ka mid ah ugu faraxsan yahay ku dhawaad ​​qadaadiicda,"Ayuu yiri, xiganaya uu waayo-aragnimo u gaar ah isku dayaya in ay ganacsiga.
"Waan soo dhawaynaynaa baaritaan kasta oo u adeegaya in la kobciyo suuqa xeerarka ku salaysan iyo sababi jilayaasha xun,"Winklevoss, Madaxweynaha sarrifka Gemini ah, ku sheegay hadal uu.
Kraken ku hayaa waa xeer maamulka Bush sida talada guud
sarrifka cryptocurrency ku salaysan Francisco San Kraken ayaa kiraystay ah xeer federaalka hore ee Madaxweyne George W magacaabay. Bush inuu kuugu adeego sidii ay talada guud.
Business Insider ayaa sheegay in is-dhaafsiga, siddeedaad ee ugu weyn adduunka iyadoo mugga a maalin kasta ka hooseeyso $350 million, ayaa kiraystay Mary Beth Buchanan, gabadhii ugu horeysay oo qof yaraa ee abid u magacaabay xeer ilaaliyaha Maraykanka ee Degmada Western ee Pennsylvania.
20% ee hay'adaha maaliyadeed ka fiirsaneysa adeegyada ganacsiga crypto in 2018 Sidaas waxa muujiyay suaalo Reuters
Natiijooyinka sahankani sii daayay warbixin dhaqaale ku salaysan shirkadda Ontario Thomson Reuters soo bandhigeysa xiisaha sii kordhaya ee suuqa cryptocurrency ah.
Thomson Reuters waraystay 400+ macaamiisha iyo ogaaday in mid ka mid-shanaad oo ka mid ah ayaa qorsheyneysa in ay bixiyaan adeegyada ganacsiga cryptocurrency ee soo socda 12 bilood, ay sabab u tahay koror weyn oo tirada codsiyada ka yimaada ganacsatada, taas oo ah "isbeddel wayn."
Maxaa baahsan doonaa Facebook eg?
Mark Zuckerberg keentay ...
Amazon ayaa ku guuleystay taabasho ah ...
rebajas pronovias ayaa sheegay in: